Infographic: MaSocial Networks Anochinja Sei Hupenyu Hwedu | Martech Zone
nhasi social media mapuratifomu tine basa rakakosha kuita muhupenyu hwedu. Mabhirioni avanhu kutenderera pasirese vanozvishandisa kutaura, kunakidzwa, kushamwaridzana, kuwana nhau, kutsvaga chigadzirwa / sevhisi, shopu, nezvimwe.
Zera rako kana kwawakabva hakuna kukosha. Masocial network anokanganisa maitiro ako ezuva nezuva zvakanyanya. Iwe unogona kusvika kune vanhu vane zvakafanana zvido kune zvako uye nekuvaka hurefu hunogara hushamwari kunyangwe iwe usingazivikanwe.
Unogona kunzwira tsitsi nevamwe vanhu vazhinji pasirese nekungoshandisa iyo yakafanana hashtag. Kunyangwe iwe ungasaratidza mufananidzo wako chaiwo kwavari, asi ivo vanozopindirana nezvako zvemukati.
Vanhu vese vanobva kwakasiyana hupfumi uye tsika dzakasiyana vanoshandisa pasocial network nekushinga. Muchokwadi, zvakaoma kufungidzira zuva risina vezvenhau.
Zvese izvi zvaingova mhedzisiro yemagariro enhau pavanhu. Vezvematongerwo enyika, hurumende, varidzi venhau vechivanhu, mashura, vanozivikanwa, uye vese vane mukurumbira vari kutepfenyura meseji yavo vachishandisa aya maratidziro
Vanhu vazhinji vanovimba nenhau venhau nhau kupfuura vehurumende venhau vamiriri nekuti ivo vanofunga vanoshandisa vezvemagariro ndezvechokwadi.
Iko hakuna kana nyaya yakakosha pasirese isiri kukurukurwa mumagariro nzira. Saka pamhepo network uye zvemukati-zvinogadzirwa zvemukati iri inosanganisira chikamu chakakura chenhau dzezuva nezuva munyika.
Kune rimwe divi, mabhizinesi ari kushandisawo masocial services kutora mukana uyu mukana wakanaka kuruzhinji. Zvinangwa zvavo zvepamusoro zvinowanzo kuve chiziviso cherudzi, inotungamira chizvarwa, kutyaira traffic kune ewebhu mapeji, kukura kwekutengesa, uye kugadzirisa mabasa evatengi.
Semagumo, kushambadzira kuburikidza nemasocial network rave kukosheswa kwevanamuzvinabhizinesi vazhinji nevashambadzi. Mikana mizhinji yemabasa yakagadzirirwa vagadziri vevatengesi, zvemagetsi zvinogadzira, mamaneja enhau enhau, vagadziri vemifananidzo, nezvimwe mukati memakore gumi apfuura.
Sezvineiwo, aya mabasa akatambura kushoma pane chero chikamu chipi zvacho panguva yekupararira kwe COVID-19. Iko kugona kwekushambadzira midhiya enhau kure kwakurudzira mabhenji kupa vashambadzi vari kure.
Nevanhu vanoshandisa iyo internet uye masocial network zvakanyanya kupfuura nakare kose, mikana mitsva yakabatanidzwa yezvigadzirwa kushambadzira zvigadzirwa / masevhisi.
Kana vachitsvaga chigadzirwa, 54% yevanhu vanotendeukira kune vezvenhau kune yavo research. 49% yevatengi vanoisa zvavanotenga pane ekukurudzira enhau enhau
Mabhizimusi madiki anogona kunyanya kushandisa mukana uno kumhanyisa pamhepo mishandirapamwe. Izvi zvingave zvinoshanda kwazvo uye zvinodhura kwavari uye kuwedzera vateveri vavo uye kusimbisa yavo yepazasi mutsara.
Muchidimbu, simba rezvenhau pahupenyu hwedu rakakosha. Naizvozvo, timu yedu mu Zvemagariro akafunga kupfupisa uye kuenzanisira iro rakakosha dhata mune izvi seye infographic.
Zvisinei iwe uri mushandisi wakajairika kana mushambadzi, tinokurudzira kuti utarise iyi data kuti uzive kukosha kwenzanga dzemagariro.
Tags: mutungamiri wechizvarwadzidzasimba rekutengapasocial media infographicsocial media mapuratifomusocial media statisticspasocial network simbasocial network nhambamagarironhungirwaTikTokmushandisi akagadzira zvemukati